Faqooqa: Maxay Sweden kaga duwan tahay Danmark iyo Norway - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hoggaamiyaha Dansk Folkepartis partiledare Kristian Thulesen Dahl, Hoggaamiyaha ku meel-gaarka SD, Mattias Karlsson, Hoggaamiyaha Fremskrittspartiets partiledare Siv Jensen. Sawirle: TT/ Dansk Folkeparti.
Faqooqa: Maxay Sweden kaga duwan tahay Danmark iyo Norway
In la hagaajiyo siyaasadda soo-galootiga
La daabacay fredag 5 december 2014 kl 17.00
Waa lagama maarmaan in la helo dib u habeeyn. Maadama in gebi ahaan la takooro xisbiga Sverigedemokraterna ay hor-seedayso inuu ku sii caan noqdo. Waxaa iminka looga fadhiyaa xisbiyada kale ee xubnaha ku leh baarlamanka iney si feejigan uga hadlaan siyaasadda soo-galootiga. Waxaannu soo jeedineynaa in dib u habeeyn lagu sameeyo, sida ey ku qoreen maqaal war-geeyska Dagens Nyheter boggiisa Debatt saddex xubnood oo ka tir-san xisbiga Kristendemokraterna iyo xisbiga Centerpartiet.
Bulshada Iswiidhen oo u dhiganta 2% bulsho waynta ku dhaqan waddammada ku bahoobey ururka midowga Yurub, hase yeeshee qaabila 15% soo-galootiga qaxa ku yimaada waddammada xubnaha ka ah EU. Iyadoo ay muddadii u dhexeeysay 2004 illaa iyo 2013 uu dalkani deggenaansho ka heleen qiyaastii dadyoow isugu jira soo-galooti iyo qaraabadood oo gaarsii-san 500 000 oo ruux. Qiyaastii waa tiro u dhiganta 33% ee degmooyinka dalka. 160 000 oo tiradaa ka mid ah waxay dalka ku yimaadeen qaxooti-nimo, halka 340 000 oo ka mid ahina ey dalka ku soo galeen qaraaba-nimo, hase yeshee ey 70 000 oo ka mid ah tiradaa qaraaba-nimada ku timid ey ahaayeen kuwo k u yimid qaraabadood oo qaxooti-nimo ku heley deggenaansho.
Xubnahan ka tir-san xisbiyada KD iyo Center-ka ayaa haddaba soo jeediyey in si dib u habeeyn loogu sameeyo siyaasadda soo galootiga loo baahan yahay in wax laga bedelo arrimmo ey ka mid yihiin qaxootiga uu dalkani sida tooska ah uga soo qaado xeryaha qaxootiga oo ey ku sugan yihiin. In wax laga badelo nidaamka dalabka magan-gelyo-doonka. In wax laga qabto dadyoowga la dagaalanka muqalasiinta, in la helo dhabbooyin sharci ah ee magan-gelyo lagaga soo dalban karo inta lagu sugan yahay dalka dibaddiisa, in wax laga bedelo nidaamka qiimeeynta tacliinta soo-galootiga, nidaamka is-dhex-galka oo uu ka mid yahay barashada luuqadda iyo wixii la mid ah. Waana nidaam wax ka dhimey tiradii qaxootiga ee waddammada eynu jaarka nahay sida Noorway, sida maqaalka ku cad.
Hase yeeshee ayuu leeyahay Fu'aad Maxamed oo wax ka bartay culuunta siyaasadda dawliga in xisbiga SD ay siyaasaddiisu gun-dhig u tahay in dhamman la joojiyo qaxootiga dalkan magan-gelyada u yimaada, isla-markaana aanu jirin xisbi diyaar u ah asxaabta kale wada-shaqeeyn uu la yeesho ama wada-xaajood:
Dhanka kale waxaannu og-soonnahey iney waddammada deriska la ah Iswiidhen ey ka jiraan xisbiyo la mabaadii ah SD, isla-markaana saameeyn ku yeeshay siyaasadda waddammadaa, iyagoona middaa u marey wada-shaqeeyn iyo wada-hadal ey la yeesheen xisbiyada kale ee xubnaha ku leh baarlamanka. Hase yeeshee uu sheegay caalinka Andreas Johansson Heinö in dalkan Iswiidhen aanu ku joogin dhabbadii waddammada aannu deriska nahey ee Danmark iyo Noorway, kuwaasina oo xisbiyada xag-jirka ahi saameeyn ku yeesheen siyaasadda waddammadaasi. Waa marka laga hadleyo xaaladda iminka lagu jiro:
- Xisbiga Sverigedemokraterna waxa uu leeyahay taariikh ka duwan marka loo barbar-dhigo xisbiyada Fremskrittspartiet ama xisbiga daanishka ee lagu magacaabo Dansk Folkeparti. SD waa xisbi ka soo jeeda nidaamkii nasiismada iyo cunsuriyadda, islamarkaana ay in muddo ah barnaamijyadiisu ku dhisanaayeen cunsuriyad, waana mid uu kaga duwan yahay xisbiyada Fremskrittspartiet ama Dansk Folkeparti, xisbiyadaasina oo isir ahaan salka ku haya waxa loo yaqaanno populism - waa siyaasad ku saleey-san waxa ey dadku jecelyihiin maqashiin. Xaqiiq ahaan waa farqi kala duwan, isla-markaana sabab ey ka dhigan karaan xisbiyadu in aaney la shaqeeyn xisbiga Sverigedemokraterna, sida uu sheegay Andreas Johansson Heinö, ahna caalin ku xeel dheer culuunta siyaasadda dawliga, isla-markaana ku xiran Timbro iyo jaamicadda Göteborg.
Hase yeeshee Anna Gaarsdlev, oo dalkan Iswiidhen uga warranta idaacadda Danmark ay sheegtay mar ay u warrameeysay laanta Agenda ee Svt iney kala duwan yihiin aragtida aragtida qaxootiga ey ka qabaan bulsha waynta Danmarka iyo Reer Iswiidhen:
- Annagu weligaya isuma arag inaannu nahay waddan soo-galooti, sida reer Iswiidhen ey isugu arkaan. Waxayna middaasi macnaheedu tahay inaan uga doodi karno xaaladda si ka duwan. Waana middaa ey labada dal ku kala duwan yihiin, daanishka iyo iswiidhishku, waana fikir uu ku raac-san yahay Andreas Johansson Heinö in kala duwanaantu macne ku fadhido.
Dalka Danmark ayuu xisbiga Dansk Folkeparti, muddo sanooyin ah uu xulufo la ahaa xisbiga dawladda dalkaasi u ahaa xisbi taageera siyaasaddiisa, halka uu xisbiga Fremskrittspartiet uu xubin ka yahay xubnaha dawladda noorway wixii ka dambeeyay 2013, halka ay hoggaamiyaha xisbiguna Siv Jensen hayso jagada wasiirka maaliyadda.
Hase yeshee ay u muuqato caalinka Andreas Johansson Heinö in aanay dalkan ka suurtagal ahayn falalka ey ku dhaqaaqeen asxaabta waddammada Noorway iyo Danmark, maadaama xisbiyada dalkani dhammaantood albaabbada ka xirteen xisbiga SD:
- Iminka wuxuu xisbiga Sverigedemokraterna shuruud ka dhigay in aanan laga filan taageero dhanka miisaaniyada ah oo laga helo ciddii aan diyaar u ahayn inay wax ka badasho siyaasadda soo-galootiga ee dalka. Waana mid albaabbada u xireeysa haba yaraatee wada-shaqeeyn xisbiga lala sameeyo ee la xiriira tiirarka kale ee siyaasadda. Haddii ay middaa dhacdana waxay hor-seedeysaa in wax laga badalay siyaasadda soo-galootiga. Waana middaa aan u arko in aad loo kala fog-yahay iyo inaanay suurtagal ahayn wada-shaqeeyn lala yeesho SD, sida uu sheegay Andreas Johansson Heinö, ahna caalin wax ka bartay culuunta siyaasadda dawliga, kana howl-gala jaamicadda Göteborg.